На чтение: 23 минОпубликовано: 29.12.2021 Рубрика: Запчасти
Ndezvipi zvigaro zvinogona kuiswa pane VAZ 2109?
PaVAZ 2109, unogona zvakare kuisa zvigaro kubva kuFord, uye kwete chete kubva kuFocus. Izvi zvinogona kuve zvigaro kubva kuFiesta, Mondeo uye mamwe mamodheru. Aya zvigaro zvakare akaumbana uye iwo masenduru anoatendera iwo kuti aiswe muminina pasina matambudziko.
Ndezvipi zvigaro zvinogona kuiswa pane VAZ 2114?
Anonyaradza uye emhando yepamusoro zvigaro kubva kune dzimwe nyika mota paVAZ 2114 anogona kupihwa kubva kuAudi A4, Hyundai Lantra, Opel Vectra, Opel Astra uye Ford. Kana iwe urikuenda kunotora disassembly, iwe unofanirwa kuyera hupamhi hwezvigaro uye kutora maficha ekubatanidza kuitira kuti iwe ugone kuenzanisa uye kuita sarudzo chaiyo.
Ndezvipi zvigaro zvinogona kuiswa paVAZ 2108?
Mune VAZ 2108/2113, unogona kuisa kwete zvigaro chete kubva kuAudi, asi zvakare kupeta zvigaro kubva kumhando dzese dzeVAG Boka — Volkswagen, Skoda, Seat. Izvo zviyero zvezvigaro izvi mune akawanda mamiriro akafanana.
Ndezvipi zvigaro zvinogona kuiswa paVAZ 2110?
Ndeapi magaro akakodzera Vaz 2110? Zvinenge zvigaro zvese kubva kumota dzakaenzana saizi zvinogona kuiswa.
Iyi ingori mienzaniso mishoma inozivikanwa:
BMW E60. .
Hyundai i40 kana Hyundai i30. .
Skoda Octavia A5. .
Ford Focus. .
Ungabvisa sei zvigaro zvepamberi pane zvipfumbamwe?
Kubvisa zvigaro zvepamberi:
Uchishandisa kiyi gumi nenhatu, sunungura nzungu ina pasi pechigaro. Kubvisa chigaro chepamberi cheIVZ 13. Zvino chikamu chayo chepamberi chinogona kusimudzwa.
Isu tinosunungura mabhaudhi mana ayo anonamira iwo slide kune muviri wemotokari. Simudza chigaro kumusoro .
Bvisa chigaro uende nacho kunze kwemotokari.
Maitiro ekuisa zvigaro pane Vaz 2114?
Maitiro ekubvisa nekuisa chigaro chepamberi pane VAZ 2113, 2114, 2115
Tinofambisa chigaro kumberi kusvika chamira. .
Fambisa chigaro munzira yese yekumashure uye bvisa manzwi mana uye bvisa zvigaro zvekukwirisa zvigaro.
Simudza pamberi pechigaro uye sunungura nzungu mbiri dzekumberi kwekusungira sled.
Fambisa chigaro kumberi zvakare uye bvisa iyo mbiri yekumashure yakasungirirwa nzungu.
Isu tinotora chigaro kubva mupasi revapfuuri.
Ndezvipi zvigaro zvinokodzera Vaz 2121?
Ngatitangei nerondedzero yezvigaro zvatakatenga zvekuisa muVAZ 2121 Niva: Alfa Romeo 147, Audi A3, Audi TT, BMW (mazhinji mamodheru akabatana), Citroen C1, C2, C3, C5, Fiat, Ford Ka, Honda Jazz, Hyundai Elantra, Getz, Coupe, Mercedes SLK, Opel Astra uye Corsa, Peugeot 307 uye 308, Renault Megane, Saab .
Ndezvipi zvigaro zvinokodzera Vaz 2114 pasina shanduko?
Ndeapi zvigaro zvepamberi zvinokodzera Vaz 2107?
Unogona kuisa zvigaro pane VAZ-2107:
Kubva kuMercedes-Benz W210.
Kubva Toyota Corolla E100.
Kubva kuToyota RAV4 XA10G mota.
Kubva kuAudi 80.
Kubva pamotokari yeScorpio.
Ndezvipi zvigaro zvakakodzera Vaz 2106 kubva kune dzimwe nyika mota?
Zvigaro kubva kuSeat Leon yeVAZ 2106
Izvo zvekuti iwe unoona zvigaro kubva kuSiti muVAZ 2106 pamufananidzo zvinoratidza kuti dzinenge dzose zvigaro zveVAG Group zvinogona kuiswa muClassic, uye iyi Volkswagen, uye Audi, uye Skoda neSeat. Izvo zviyero zvavo zvakafanana.
Ungabvisa sei zvigaro zvepamberi pane Vaz 2112?
Maitiro ekubvisa nekuisa chigaro chepamberi pane VAZ 2110, 2111, 2112
Nhanho yekutanga kufambisa chigaro chepamberi kumberi kusvikira yamira. .
Mushure meizvozvo, tinodzosera chigaro kumashure kusvikira chamira uye bvisa nzungu ina kuchengetedza mabhureki.
Mushure mokunge nzungu dzatsemurwa, mabhureki anobviswa zviri nyore kubva muzviruva.
Mushure mekubvisa mabhureki, simudza kumberi kwechigaro.
Nzira yekubvisa sei chigaro chepamberi kumashure kweVAZ 2110?
Kuti ubvise upholstery kubva kumusana, iwe unofanirwa kutanga wabvisa musoro wemusoro. Pamucheto wezasi weiyo backrest, iyo upholstery yakasungwa nemeno esimbi. Isu tinovatwasanudza nemapuri uye tinosunungura iyo upholstery. Iye zvino tinoibvisa (haufanire kuidhonza kumusoro), ichitenderedza kumberi nekumashure mativi mukati nekumwe.